Liiska buuxa ee smartwatches ee cusbooneysiiya Android Oreo | Androidsis
Eder Ferreño | | Smartwatch, Noocyada Android
Isla toddobaadkan Android Oreo ayaa shaaca ka qaaday inuu imanayo Android Wear 2 smartwatches. Cusbooneysiin taas wuxuu ka tagayaa dhowr horumar. Laakiin, lama ogeyn saacadaha ama goorta cusbooneysiintan imaaneyso. Nasiib wanaag, waxaan horeyba u heynaa macluumaad dheeri ah maalmo yar kadib.
Dhowr maalmood oo aan sugay kadib, Google ayaa ugu dambayntii shaaca kaqaaday liiska smartwatches oo dhameystiran kaas oo heli doona casriyeynta Android Oreo. Marka waxaan horeyba u ogaanay kuwa nasiibka leh. Ma rabtaa inaad ogaato haddii saacaddaadu ku jirto liiska? Waxbadan ayaan idinkugu sheegi doonnaa hoosta!
Shirkadda wuxuu horey u daabacay liiska saacadaha horey u cusbooneysiiyay ama u cusbooneysiin karo Android Oreo. Waxa intaa dheer in qalabka in dhawaan awood u yeelan doonaan inay sameeyaan. In kastoo, illaa iyo hadda taariikhaha ay aaladuhu la socdaan Android Wear 2 awood u yeelan doonaan inay cusbooneysiiyaan. Qeyb weyn maxaa yeelay waxay kuxirantahay soosaarayaasha. Marka macno ahaan waa inaan sugnaa.
Kadib waxaan kaaga tageynaa liiska oo dhameystiran, u kala qaad kuwa horey u heley cusbooneysiinta Android Oreo ee la heli karo iyo kuwa aan weli helin.
1 Smartwatches oo hadda u cusbooneysiin kara Android Oreo
2 Smartwatches oo la cusbooneysiin karo
Smartwatches oo hadda u cusbooneysiin kara Android Oreo
Ciyaaraha LG Watch
Smartwatches oo la cusbooneysiin karo
Casio WSD-F10 Ilaalinta Bannaanka Smart
Diesel Ilaalada Buuxda
Emporio Armani Ku Xidhan
Xakamaynta Fosil Q
Fosil Q Aasaasihii 2.0
Isku xidhka Gc
Qiyaasta Isku xidhka
Hugo BOSS BOSS Taabasho
Nooca LG Watch
Isku xidhka Movado
TAG Heuer Tag wuxuu ku xiran yahay qaybsan 45
Tommy Hilfiger 24/7 Adiga
Xilligan Waxaan horeyba u ogaanay saacadaha leh 'Android Wear 2' kuwaas oo u cusbooneysiin doona Android Oreo. Waxa aynaan ogeyn weli waa taariikhaha tani dhici doonto. Marka waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan maqli doono wax badan oo ku saabsan. Miyuu smartwatch-kaaga ku jiraa liiska kuwa la cusbooneysiinayo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Google wuxuu xaqiijinayaa saacadaha casriga ah ee cusbooneysiin doona Android Oreo